Atụmatụ na usoro banyere Adobe Premiere, amalite site Plugins
Ị chọrọ ịbụ onye na pro nke na-eji Adobe Premiere dezie videos? Ego ndị Atụmatụ na usoro ike ị gaghị ama na ka na-amalite site Adobe Premiere Plugins.
1 Adobe Premiere Import na Export
1.1 Adobe Premiere Atụmatụ
1.3 Dezie 4K Video na Adobe Premiere
1.4 MTS ka Adobe Premiere
1.5 MP4 ka Adobe Premiere
1.6 MOV ka Adobe Premiere
1.7 FLV ka Adobe Premiere
1.8 AVCHD ka Adobe Premiere
1.9 Premiere ka YouTube
1.10 Premiere ka DVD
2 Adobe Premiere ngwa mgbakwunye
2.2 Adobe Premiere Aha Templates
Ma gụọ 2.3 Adobe Premiere Uzo mkpirisi
3.2 Adobe Premiere Ihe Alternative
3.4 Emetụta mmetụta Vs Adobe Premiere
4 Adobe Premiere ụdịdị
4.1 Adobe Premiere System chọrọ
4.2 Adobe Premiere maka Mac
Ọtụtụ oge a video ese foto mmepụta na AVCHD format, nke a na-emepụta MTS faịlụ na ị chọrọ mbubata n'ime Premiere dezie ọnụ na-arụ ọrụ na dị ka ị chọrọ. Ọ bụ ezie na faịlụ Ọkpụkpọ bụ ọkọlọtọ
1. Imeso MTS faịlụ
Importing MTS faịlụ na-a dị mfe usoro, na-amalite a ọhụrụ oru ngo site na isi menu
Ị nwere ike mgbe na-enye ya a kwesịrị ekwesị aha na ịgbanwe ebe faịlụ ndị na-emi odude dị na mbụ.
Ozugbo oru ngo na-kere e nwere ụzọ abụọ ịgakwuru ibubata usoro.
Ị nwere ike na-eji media nchọgharị inyocha media na kọmputa gị na mmasị draịva dị ka ebe a
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maara ebe faịlụ bụ quicker usoro bụ iji faịlụ> Bubata iji bugote ọkọlọtọ sistemụ faịlụ nchọgharị interface na ịnyagharịa ogologo na ya dị ka ebe a.
Mgbe nhazi faịlụ, ị na-ekpe na gị na oru ngo njikere ịga. Ịgbanwee gaa na Project Panel na e nwere ihe dị media dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a.
Ị nwere ike ugbu ịdọrọ faịlụ n'ime Isi Iyi na usoro iheomume ogwe-amalite ọrụ na ya dị ka ihe ọ bụla ọzọ oru ngo.
2. Video Igwefoto Wezụga
N'ihi na ụfọdụ ụdị nke video igwefoto E nwere nsogbu na ike ga-atụba elu. The isi mgbe importing kpọmkwem site igwefoto mmepụta ma ọ bụrụ na ị na-ahụ mbipụta bụ iji media nchọgharị mbubata dum nchekwa Ọdịdị nke ahụ AVCHD mmepụta si igwefoto, a ana achi achi na ọ bụla dị mkpa Associated faịlụ na-gụnyere na MTS faịlụ maka ojiji. Ị ejedebe na otu ikpeazụ ebe ndị mkpachị nọ Project Panel njikere dọkpụụrụ na na usoro iheomume nke edezi.
Nke a bụ ọdịnaya nke a kaadị si a Panasonic Igwefoto ihe atụ
Ugbu a maka igwefoto a na m maara na video faịlụ onwe ha na-emi odude n'ime Private nchekwa, ma ọ bụrụ na ị na-amaghị i nwere ike imeghe ọ bụla n'aka, media nchọgharị ga-egosi gị mgbasa ozi faịlụ na onye ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbe Premiere ga-emekwa ka a na-akpaghị aka, e nwere bọtịnụ na top ka a mata ụdị faịlụ na ị na-importing, n'okpuru bụ anyị onwe nchekwa na bọtịnụ na-egosipụta na ọ bụ AVCHD mode.
Nanị họrọ nke mkpachị ị chọrọ iji na mbubata ha.
The isi ihe na-gị bupu usoro bụ ihe ị chọrọ iji ikpeazụ faịlụ maka.
3. exporting ka ụdị faịlụ ndị ọzọ
N'ihi na ọtụtụ ọnọdụ ikekwe ị ga-achọ ka atụgharị gị MTS faịlụ n'ime ihe ọzọ, na ebe a na usoro e mere mfe n'ihi na ị site Premiere. N'ihi na YouTube ma ọ bụ yiri ị ga-ahọrọ H.264 format, na mgbe na-eji otu n'ime ọtụtụ presets esịne ke Premiere ona n'elu ikpo okwu, ebe anyị na-ahọrọ a mkpebi na etiti ọnụego preset maka YouTube na ọkụ anyị mbụ footage.
Ahọpụta a na ịpị bupu ga-aza usoro na-akpaghị aka tọghata ya jidesie ọhụrụ faịlụ ụdị n'ihi unu, njikere maka bulite ka gị chọrọ ọkara.
4. exporting dị ka ihe MTS faịlụ
Otú ọ dị, e nwere ọnọdụ ndị na-i nwere ike ịhụ na ị chọrọ na-MTS usoro. Na na akpa ilekiri a nwere ike iyi a nzọụkwụ kwa anya maka Premiere na-enweghị nhọrọ maka ya na format menu ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a.
Ma, e nwere ihe ngwọta. Tupu anyị ga-esi na, n'agbanyeghị na, m ga-asị na maka ọgụgụ ka ukwuu nke oru na ngwa, converting na MTS faịlụ na a ogbo bụ nnọọ ihe kasị mma nhọrọ, na n'ihi na ọtụtụ ndị a ga-abụ ụzọ.
Ihe ị n'ezie tọghata ya bụ N'ezie dabere na otú ikpeazụ video ga-eji, ma e bụ ezuru nhọrọ n'ime Premiere n'ihi na ihe ma ọ bụ obere ihe ọ bụla ma ọ bụ adabara chọrọ.
Na na si ụzọ anyị nwere ike lee esi gburugburu enweghị MTS format ntọala mbupụ mkparịta ụka dika ayi gosiri.
Ihe mbụ na-eme bụ mata chọrọ usoro n'ime usoro iheomume ma ọ bụ Project Panel, na-aga site faịlụ> bupu> Mgbasa ozi iji bugote bupu mkparịta ụka ka nkịtị.
N'ihi na anyị na format, dị ka oyiyi-egosi, anyị nwere họrọ H.264 Blu-ray, na site na ebe anyị na-ị na-ahọrọ a preset na nke ahụ bụ ezigbo egwuregwu ka anyị mbụ footage na okwu nke mkpebi na etiti ọnụego.
Na na họrọ, ọ bụrụ na anyị na-ele anyị mmepụta faịlụ na zuru ezu anyị pụrụ ịhụ na ọ bụ ezie na ntọala dakọtara na mbụ faịlụ dị ka anyị chọrọ, ma mmepụta aha na-egosi na faịlụ a bụ ihe .m4v faịlụ, nke bụ bụghị format anyị na-achọ doro anya.
Otú ọ dị, ị pụrụ ịhụ n'okpuru anyị Switched ka multiplexer taabụ, nke bụ na ndabara setịpụrụ dị ka 'Ọ dịghị onye'. Ọ bụrụ na anyị ugbu a họrọ 'TS', anya na ihe na-eme ụdị nke faịlụ.
The ntọala na-niile ka kenha àgwà anyị, mkpebi na etiti ọnụego zaa, na faịlụ bụ ugbu a, site ndabara, outputting dị ka ihe m2t faịlụ. Nke a bụ n'ezie otu usoro, ma ị nwere ike ịgbakwunye 's' on ọgwụgwụ ndakọrịta na ọ dịghị nsogbu mgbe ọ na-kere.
5. na-eke gị Atọrọ
The ikpeazụ nzọụkwụ na i nwere ike ime n'ebe a ma ọ bụrụ na ị chọrọ mgbe nile mmeputa MTS faịlụ bụ ịzọpụta ntọala ndị a dị ka a omenala preset.
Na ndị niile na nhọrọ na ị họrọ na ebe, ị pịa bọtịnụ ọzọ na Atọrọ menu dị ka e gosiri n'ebe a.
Na ịpị bọtịnụ-ewe gị Save preset mkparịta ụka nke-enye gị ohere nyegharịa preset ihe kwesịrị ncheta otú ị maara ihe ọ na-eme
Ndien ke akpatre, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya ọzọ ke ukperedem ụbọchị, ị họrọ ya ka ọ bụla ọzọ preset dị ka ebe a.
M anya na a Walkthrough gosiworo gị na MTS faịlụ abụghị njedebe nke ụwa na-arụ ọrụ, nanị tricky bit na dum usoro importing na-n'ịhụ na ị na-ekwe Premiere ka 'ịhụ' na nchekwa Ọdịdị ma ọ bụrụ na mgbasa ozi na-abịa kpọmkwem si a igwefoto, a mbo ihu ya Mbubata niile dị iche iche ọmụma ọ chọrọ tinyere video maka ịga nke ọma edezi nke oru ngo.
Exporting bụ, dị ka anyị pụrụ ịhụ, n'ụzọ kwụ ọtọ otu ugboro ị mara ebe na nhọrọ a liri ya, na ichekwa na ka a preset pụtara na ọ bụ mgbe niile na otu click dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ preset esịne ke premiere bụ n'ọdịnihu.
Nke a bụ isi nkuzi banyere Adobe Premiere, ọkachamara video edezi software. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video edezi bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Video Converter Ultimate, nke bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Ọzọkwa ụfọdụ formats cann't Direct dezie, ị nwekwara ike tọghata usoro edezi na Software. Download free ikpe version n'okpuru.
Olee otú m Mbubata An MOV File (QuickTime) na Adobe Premiere?
Olee otú mbubata AVCHD ka Adobe Premiere na Best Ogo
American TV Series formulas / eme Ị dịghị mgbe Akwara Ụta Maara
> Resource> Video> Olee mbubata MTS ka Adobe Premiere (CS3 / CS4 / CS5 / CS6 gụnyere)